पत्रकार महासंघ :प्रदेश २ को कुन जिल्लामा कसको नेतृत्व ? धनुषा शाखामा मनिका निर्वाचित
जनकपुरधाम। चैत्र २७ गते । नेपाल पत्रकार महासंघको बुधवार सम्पन्न निर्वाचनको नतिजा धमाधम आउन थालेको छ । बुधवार साँझ मतदान सकिए लगतै सुरु भएको मतगणना अन्तर्गत सोही दिन राती देखि नै परिणाम बाहिर आउन थालेको हो। देशभर मतगणना चलि रहदा संघमा अध्यक्षमा प्रेय युनियनका विपुल पोखरेलले लिड गरेका छन् भने उनलाई प्रेस चौतारीकी निर्मला शर्माले पछ्याई रहेकी छिन् । मत परिणाम अनुसार अधिकांश जिल्लाहरूमा प्रेस युनियनका उमेदवारहरू विजयी भएका छन् । यता प्रदेश २ का अधिकांश जिल्लामा पनि प्रेस युनियनका उमेदवारहरू विजयी भएका छन् ।
प्रदेश कमिटिमा भने प्रेस चौतारी र प्रेस पञ्चका साझा उमेदवार राजेश कर्ण प्रदेश अध्यक्षमा विजयी भएका छन्। धनुषाको इतिहासमै पहिलो महिला अध्यक्ष नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाको अध्यक्षमा मनिका झा निर्वाचित भएकी छन् । २६ औँ अधिवेशनबाट निकटम प्रतिद्वन्धी पुरन साहलाई पराजित गर्दै झा निर्वाचित भएकी हुन् । उनी धनुषा शाखाको इतिहास मै पहिलो महिला अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएकी हुन् । उनले प्रेस युनियनका उम्मेदवार राजन सिंह, स्वतन्त्र उम्मेदवार नित्यान्नद मण्डल, प्रेस चौतारीका धबेन्द्र झा र अर्जुन क्षेत्रीलाई समेत पराजित गर्दै ५० मत ल्याएर जित हात पारेकी हुन्। त्यस्तै उपाध्यक्षमा अवधेश कामत विजयी भएका छन्न्। महिला उपाध्यक्षमा नेहा झा निर्वाचित भएकी छन्। त्यस्तै सचिवमा बटुकनाथ झा, सह–सचिवमा निरञ्जन साह, सह–सचिव समावेशीमा गोविन्द महतो र कोषाध्यक्षमा रामकमल महतो निर्वाचित भएका छन्। बुधबार सम्पन्न निर्वाचनमा धनुषा शाखामा कुल १ सय ७४ मतदाता रहेकोमा १ सय ६२ जनाले मतदान गरका थिए े । अध्यक्ष पदम प्रेस मञ्चका उम्मेदवार पुरन साह र राजन सिंहसँग उनको कडा प्रतिस्पर्धा भएको थियो।
सप्तरीमा श्रवण देव
सप्तरी शाखाको अध्यक्षमा प्रेस युनियनका श्रवण देव निर्वाचित भएका छन्। सप्तरीमा युनियन र प्रेस संगठनको गठबन्धन भएको थियो। देवले प्रेस चौतारीका मनोहर पोखरेललाई पराजित गरेका हुन्। सप्तरी शाखाको उपाध्यक्षमा वैजनाथ यादव, महिला उपाध्यक्षमा अम्बिका दाहाल, कोषाध्यक्षमा नवीन गुप्ता, सचिवमा रामनारायण विश्वास, सह–सचिव खुल्लामा चन्दन यादव र सह–सचिव समावेशीमा गोपाल गुप्ता विजयी भएका छन्। सिरहामा बनैता सिराहामा प्रेस मञ्चका मनोज बनैता यादवको प्यानल नै विजयी भएको छ । उनी प्रेस संगठनका उम्मेदवार हिरालाल चौधरी पराजित गर्दै अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। त्यस्तै उपाध्यक्षमा गणेशप्रसाद साह,महिलाउपाध्यक्षमारिँकु कुमारी दास, कोषाध्यक्षमा वीरेन्द्रप्रसाद नेपाल, सचिवमा शिव दयाल यादव, सह–सचिवमा राजेन्द्र महतो र सह–सचिव समावेशीमा दुर्गा परियार विजयी भएका छन्। महोत्तरीमा कमलेश मण्डल नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरी शाखाको अध्यक्षमा पुनः प्रेस युनियनका कमलेश मण्डल नै निर्वाचित भएका छन्। प्रेस संगठनको सहकार्यमा मण्डल निर्वाचित भएका हुन्। उपाध्यक्षमा हेम कुमारी बराल, महिला उपाध्यक्षमा सुनिता कुमारी, सचिवमा राजकरण महतो, सहसचिवमा रामनारायण महतो, सहसचिव समावेशीमा संजित मण्डल र कोषाध्यक्षमा अजय कुमार सिंह निर्वाचित भएका छन्।
सर्लाहीमा टंक क्षेत्री
नेपाल पत्रकार महासंघ सर्लाही शाखाको अध्यक्षतामा प्रेस युनियनका टंकबहादुर क्षेत्री निर्विरोध चयन भएका छन्। आइतवार नै उनीसहितका सबै पदाधिकारी निर्वाविरोध चयन भएका हुन्। शाखाको उपाध्यक्षमा अनवर अहमद्, महिला उपाध्यक्षमा पुस्तिका के.सी. (पुष्पा), सचिवमा सुनिल कुमार ठाकुर, सहसचिवमा घनश्याम सिंह, समावेशी सहसचिवमा स्वस्तिमा अधिकारी र कोषाध्यक्षमा अच्यूतम सापकोटा निर्विरोध चयन भएका छन्।
रौतहटमा प्रेमचन्द्र झा
नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट शाखाको अध्यक्षमा प्रेमचन्द्र झा निर्वाचित भएका छन्। उपाध्यक्ष प्रविण शर्मा, महिला उपाध्यक्षमा रजनी ठाकुर, सचिवमा मदन ठाकुर, कोषाध्यक्षमा धमेन्द्र साह, सहसचिव समावेशीमा संजय सहनी निर्वाचित भएका छन्। सह–सचिव खुल्लामा दिपेश पौडेल निर्विरोध चयन भएका थिए ।
पर्सामा अनुप तिवारी
नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखामा प्रेस चौतारीका अनुप तिवारीको प्यानल नै निर्वाचित भएका छन्। उपाध्यक्षमा युवराज खड्का, महिला उपाध्यक्ष सुषमा शर्मा, सचिवमा भूषण यादव, सहसचिवमा जियालाल साह, सहसचिव समावेशीमा जितेन्द्र साह र कोषाध्यक्षमा सञ्जीवकुमार मिश्र विजयी भएका छन्।
महासंघको बारा अध्यक्षमा प्रेस युनियनका तर्फबाट रेशम तिवारी निर्वाचित भएका छन्। निकटतम प्रतिद्वन्दी गोकुल घोरसाईनेलाई पराजित गर्दै अध्यक्षमा तिवारी विजयी भएका हुन्। त्यस्तै उपाध्यक्षमा रामबाबु प्रसाद मेहता, महिला उपाध्यक्षमा लक्ष्मी पाण्डे विजयी भएका छन् भने सचिवमा अनिल गौरव, सह सचिवमा अनिल कुमार साह, समावेशी सहसचिवमा दुश्यान्त चौधरी, कोषाध्यक्षमा श्याम गुप्ता विजयी भएका छन् ।
27 दिन पहिले 115 Post Views